မင်္ဂလာပါအဲဒီမှာမှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်မိသားစုလေးညမ်းဂိမ်းများ–နေတယ်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာအချို့များအတွက်နောက်ဆုံးပေါ်နှင့်အကြီးမားဆုံးရော်လုပ်ဆောင်မှုပတ်ပတ်လည်အခြေတည်၏၊သင်ဆက်ဆက်ထိအညာဘက်ပွဲချင်းပြီး! အရှည်ဆုံးအချိန်၊ကျနော်တို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်ထွက်အလုပ်လုပ်ဖို့အကောင်းဆုံးအဖြေဖြစ်နိုင်ဖို့ဆောင်ခဲ့မိတ်ဆွေထွက်ရှိသောပစ္စည်းအမျိုးအစားချင်ကြောင်း။ ပစၥည္းမ်ားကသာ၏အိပ်မက်မှာတော်တော်အများကြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့အာရုံစူးစိုက်သောကြောင့်၊ကျွန်တော်သိသောအခါတွန်းအားပေးတွန်းထိုးဖို့လာ၊လူတွေအတွက်သာစိတ်ဝင်စားကြရတဲ့မိမိတို့လက်ကိုအပေါ်အကြွင်းမဲ့အာဏာအကောင်းဆုံးအကြောင်းအရာဖြစ်နိုင်။, လျှင်ဤသည်အကြောင်းအရာတစ်ခုခုသင်လည်းအိပ်မက်၏–ကောင်းစွာ၊ရုံမယ့်ကြီးမြတ်အချိန်ရှိသည်မှာမိသားစုလေးညမ်း။ သရော်သည်ကျွန်တော်တို့၏အာရုံစိုက်နှင့်လူတိုင်းသိတယ်အကောင်းဆုံးအနောက်ပိုင်းကာတွန်းအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအာရုံစူးစိုက်သည်မိသားစုလေး! အားလုံး၏အဓိကဇာတ်ကောင်နေရာနှင့်ဟုတ်ကဲ့၊သူတို့ဖြစ်သွားတာပါ။တော်တော်စက်ဆုတ်ဘွယ်ဖြစ်သောဥစ္စာနှင့်အတူ။ အရာတစ်ခုခုမယ်လျှင်သင်စဉ်းစားသင်ကိုင်တွယ်နိုင်ပါတယ်၊ဒါဟာဖြစ်နိုင်အကောင်းဆုံးသင်တခြားနေရာကြည့်ရှုအတွက်အွန်လိုင်းအရပ်မှပယ်တွင်လူရှုပ်မှာ။, ကျွန်တော်တို့မကြောက်ဖို့ဝန်ခံနေတာကငါပြောနှင့်အတူအမြင့်ဆုံးအဆင့်ဆင့်၏ယုံကြည်စိတ်ချမှုမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့တယ်လုံးဝဖြစ်ပါသည်ကြယ်မှာပေးချင်သင်သည်အဘယ်သို့–အဘယ်သူမျှမမေးသောမေးခွန်းများ!
ဒါကြောင့်အရေးကြီးဆုံးအရာကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်ညာဘက်အစမှအကြောင်းကျွန်ုပ်တို့တယ်ဝင်ရောက်နိုင်ကြောင်းအရာအားလုံးကျနော်တို့တာဝန်ခံလုံးဝအခမဲ့။ မှန်–သင်လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်များအတွက်ပေးဆောင်ဖို့အကောင့်တစ်ခုနိုင်ဖို့အတွက်လက်လှမ်းအဘယ်အရာကိုကျနော်တို့ကရရှိပါသည်! တော်တော်ချိုမြိန်စာချုပ်၊လက်ျာ? မရှိအနိုင်ရမှပေးဆောင်အဓိပ္ပါယ်မှာဖြစ်စေ:ကျွန်တော်ထင်တာကဒီအမှန်တကယ်အပူဆုံးခရီးအွန်လိုင်းဆိုရင်စိတ်အားထက်သန်နေတဲ့အတွက်အချို့ကားဂိမ္းကပတ်ပတ်လည်အခြေတည်၏။ လမ်းကြောင်းသစ်ရှိခဲ့သည်ပြီးခဲ့သည့်ဆယ်စုနှစ်အတွင်း၏ဂိမ်းများနိုင်ဖြစ်ခြင်းမှပံ့ပိုးသူတို့ကိုယ်သူတို့အားဖြင့်အမျိုးမျိုးသောနည်းလမ်းများကိုခံရစဉ်လုံးဝအခမဲ့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုရန်။, ဥပမာ၏အကြိုက်ကိုထည့်သွင်းလမ်းကြောင်းများနှင်:သွားနှင့်အဖွဲ့ချုပ်၏ဒဏ္ဍာရီ–အကယ်ပင်ဖြန့်ချိရန်တတ်နိုင်ကြသည်ရုံဒဏ်ငွေပြုပါ၊ရာကိုရပ်တန့်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုထံမှတူညီသောအရာ? သင်တန်း၏၊ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုပြန်ကြွလာရန်အနိုင်ဖြစ်ခြင်းအမှန်တကယ်ပေးအဆိုပါဂိမ်းကစားကိုအဘယ်သို့သူတို့အလိုရှိသောအခါ၊သင်အခမဲ့အသုံးျပဳမိသားစုလေးညမ်းဂိမ်း၊သင်ပေးစွမ်းဖို့ကြိုးစားမယ့်အရာကိုဒီမှာကမ်းလှမ်းမှုကိုအပေါ်တစ်ဦးစောင့်ရှောက်မှုလောကအတွက်။ ကျွန်မစိတ်လှုပ်ရှားမိနိုင်စေဖို့သင်ပြောပြအကြောင်းကိုအားလုံးဒီစီမံကိန်းနှင့်အဘယ်အနာဂတ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ပလက်ဖောင်းပူဇော်ဖို့ရှိပါတယ်–ကအမှန်တကယ်မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်၊ရှေးရှေး။, ကျနော်တို့ချစ်နိုင်ဖြစ်ခြင်းသင်ပေးနိုင်ပေမယ့်ဘာမှမအတွက်အကောင်းဆုံးညစ်ညမ်းဂိမ္းချမ်းသာ!
စဉ်တွေအများကြီးအခြားယိုထွက်ရှိတြညမ်းပတ်ပတ်လည်ဂိမ်းနှင့်ကြကုန်အံ့အခြားနေရာများထုတ်ဝေ၊သူတို့မိသားစုလေးညမ်းဂိမ်းများကိုတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် ၁၀၀%သီးသန့်ချာ။ ဒီအတိုင်းဂိမ်းအတွင်းဥစ္စာခံစားမပါဘဲတစ်ဦးစောင့်ရှောက်မှုလောကအတွက်:သင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်ကြည့်ရှုအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏မော်ကွန်းတိုက်နှင့်ကိုယ်အဘို့ကိုတွေ့မြင်ကြောင်းအရာအားလုံးကိုကဒီမှာတော်တော်လေးအပြစ်တင်ဖွယ်ချိုမြိန်! ကျွန်တော်တို့သုံးစွဲမယ့်အချိန်အများကြီးနှင့်စွမ်းအင်ရတဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဟုမပါဘဲဒါဟာဝင်ထိန်းသိမ်းသီးသန့်ကျော်ထိန်းချုပ်ရေးကျွန်တော်တို့ရဲ့စုဆောင်းမှု၏ခေါင်းစဉ်ဖြစ်သည်၊လက်ျာအဆင့်သည်အမျိုးအစားပလက်ဖောင်းချင်သောထိန်းသိမ်းထားဖို့။, ဒါဟာအမှန်တကယ်အလွန်ကြီးစွာသောစဉ်အခါဤအချက်အချာရှယ်ယာအားလုံး၎င်းတို့၏အဂိမ်းများနဲ့မသွားပါစေပါဘူးကစားသမားသိတော့ကျွန်မတို့ကိုယုံကြည်ပြီးတဲ့အခါကျနော်တို့အကြောင်းပြောရတဲ့အနေအစစ်အမှန်သဘောတူမှာမိသားစုလေးညမ်း။ ဒါဟာအရေးပါသည့်အာရုံသည်ငါတို့အဘို့နှင့်တငါထင်တာပေါ့သဘောပေါက်နားလည်ရန်ဖြစ်လို့ကြည့်အဖွဲ့ဝင်တဦးရဲ့ဧရိယာနှင့်သွားမယ့်ဘာကိုမြင်နိုင်။ သင်လည်းသတိထားမိမှာဒါကကျနော်တို့ရရှိပါသည်အချို့သောအမှန်တကယ်ကြယ်ဂရပ်ဖစ်–အတွက်ပစ္စည်းပစ္စယအကြောင်းအခြားသူများကိုရိုးရိုးမတူယှဉ်ပြိုင်။ ကျွန်မတို့ဘယ်လိုလုပ်ကြလဲ? ကောင်းစွာ၊ဒါကြောင့်အားလုံးရဲ့အကြောင်းကိုသေချာနေကြောင်းကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်နောက်ဆုံးပေါ်နှင့်အကြီးမားဆုံးအတွက်ညစ်ညမ်းဂိမ်းကစားခြင်းချမ်းသာနှင့်အတူကြီးမားတဲ့အပေါ်အာရုံစူးစိုက်ဂရပ်ဖစ်စွမ်းဆောင်ရည်ကို။, နေစဉ်အခြားဂိမ်းများများမှာရှာဖွေနေငြီးငွေ့နှင့်ရက်စွဲ၊ငါတို့ဥစ္စာဖြစ်ကြလတ်ဆတ်လှပ–ချစ်ရန်မင့်?
ကတည်းကတက်လက်မှတ်ထိုးမှာယူရုံ ၆၀ စက္ကန့်နှင့်အဆုံးသတ်ရလဒ်ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုဖို့အခမဲ့မိသားစုလေးသင်ျညမ်းဂိမ်းများ–ယူမအဘယ်ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝဘ်ဆိုဒ်များအတွက်စမ်းသပ်မောင်းနှင်ကြည့်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာယူသောအရာကိုအကြီးကြီးပေါ်မှာအပြုံးမျက်နှာ? ခါတွန်းအားပေးတွန်းထိုးဖို့လာ၊ကျနော်တို့နိုင်ချင်မှသင်မိတ်ဆက်ဖို့တစ်ဖွဲ့လုံးသစ်ကိုကမ္ဘာ့ညစ်ညမ်းဂိမ်းကစားခြင်းပျော်စရာစောင့်ရှောက်ပါလိမ့်မယ်၊သင်ပျော်ရွှင်အချိန်အကြာလာ။ အရေအတွက်ရှိပါတယ်အလွန်ကြီးစွာသောသဘောတရားနှင့်အတွေးအခေါ်ဒီမှာပါ:တွေအကြောင်းသင်သံသယမရှိချင်ရှုပ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကျော်ချွတ်မရှိဘဲတစ်ဦးစောင့်ရှောက်မှုလောကအတွက်။, ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်၊အခုအချိန်သင်တို့အဘို့အလာအပေါ်တွင်အဘယ်အရာကိုမြင်ရန်ဤစီမံကိန်းကိုအားလုံးလောက်သည်–ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်စိတ်ချမယ့်ကြီးမြတ်အချိန်ရှိသည်နှင့်သင်မကြာမီတွေ့မြင်သောမိသားစုလေးညမ်းဂိမ်းများသည်အသွား-မှအစက်အပြောက်များအတွက်အွန်လိုင်း XXX ဂိမ္းအရေးယူ!